ဒူဒူကြီး: GMDSS နဲ့ Fleet
INMARSAT ဆိုတာက၊ International Maritime Satellite Organization ဆိုတဲ့၊ ဂြိုဟ်တုဆက်သွယ်ရေး စနစ်သုံး ဗြိတိသျှ Mobile Telecommunication အဖွဲ့အစည်းဖြစ်ပြီး၊ IMO International Maritime Organization မှ အထောက်အပံ့ ပေးထားပါတယ်။ INMARSAT ဟာ GMDSS Services တင်မက၊ GPRS ဆိုတဲ့ General Packet Radio Service တွေနဲ့ BGAN ဆိုတဲ့ Broadband Global Area Network Services တွေကိုပါဆောင်ရွက်ပေးပါတယ်။
INMARSAT ဂြိုဟ်တုတွေဟာ Global beam coverage, Regional spot beam coverage နဲ့ Narrow spot beam coverage ဆိုပြီး၊ နေရာဒေသအကွာအဝေးပေါါမူတည် ခွဲခြားလို့ ဆက်သွယ်ပေးပါတယ်။ INMARSAT ဂြိုဟ်တု တွေကို Inmarsat -2satellites အုပ်စု၊ Inmarsat -3satellites အုပ်စုနဲ့ Inmarsat -4satellites အုပ်စု ရယ်လို့ခွဲခြားနိုင်ပါတယ်။
Inmarsat -2satellites အုပ်စုဂြိုလ်တုတွေဖြစ်တဲ့၊ Delta II, Ariane4နဲ့ Proton - K အစရှိတဲ့ ဂြိုဟ် တုတွေကို (၁၉၉၀)၊ (၁၉၉၁) နဲ့ (၁၉၉၂) ခုနှစ်များဆီက လွှင့်တင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး၊ အများဆုံးအကွာအဝေး အနောက်လောင်ဂျီတွဒ် (၁၄၂) ဒီဂရီ နဲ့ အရှေ့လောင်ဂျီတွဒ် (၁၀၉) ဒီဂရီအထိ Coverage လုပ်နိုင်ပါတယ်။ Ariane -4ကို (၂၀၀၆) ခုနှစ်မှာ Decommissioned ပြန်လည်လုပ်ခဲ့သလို၊ Delta II နဲ့ Proton - K တို့ ကတော့ (၂၀၁၀) ခုနှစ်နဲ့ (၂၀၁၂) ခုနှစ်တို့မှာ သက်တမ်းကုန်ဆုံးမှာဖြစ်ပါတယ်။
Inmarsat -3satellites အုပ်စုကတော့ (၁၉၉၆)၊ (၁၉၉၇) နဲ့ (၁၉၉၈) ခုနှစ်များဆီက လွှင့်တင်ခဲ့တဲ့ Atlas II, Proton - K, Ariane4အစရှိတဲ့ ဆက်သွယ်ရေးဂြိုတ်တုတွေကို အသုံးပြုထားပြီး၊ အရှေ့လောင်ဂျီတွဒ် (၂၅) ဒီဂရီကနေ အနောက်လောင်ဂျီတွဒ် (၁၅ ဒသမ ၅) ဒီဂရီအထိ Coverage လုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်။
Inmarsat -4satellites အုပ်စုကတော့ (၂၀၀၅) နဲ့ (၂၀၀၈) ခုနှစ်များဆီက လွှင့်တင်ခဲ့တဲ့ Atlas V, Sea Launch Zenit - 3SL, Proton - M/ Briz - M အစရှိတဲ့ ဆက်သွယ်ရေးဂြိုတ်တုတွေကိုသုံးထားပြီး၊ BGAN Broadband Global Area Network Family ရယ်လို့ခေါါပါတယ်။
Inmarsat -3satellites အုပ်စုမှ၊ လက်ရှိမှာ Aeronautical (Classic Aero), Inmarsat - B, Inmarsat - C, Inmarsat - M, Mini - M, GAN (Global Area Network), Fleet, Swift 64, Inmarsat D/ D+/ Isat M2M နဲ့ MPDS (Mobile Packet Data Service) စတဲ့ဝန်ဆောင်မှုများကိုပေးပြီး၊ အရင်ကတော့ Regional BGAN (R-BGAN), Inmarsat - A နဲ့ Inmarsat - E ဆိုတဲ့ဝန်ဆောင်မှုများ ကိုပေးခဲ့ပါတယ်။
ဒီနေရာမှာ ကုန်သွယ်ရေကြောင်းဆိုင်ရာ ဆက်သွယ်ရေးစနစ် အကြောင်းကို ဖော်ပြတာဖြစ်လို့ Inmarsat - B, Inmarsat - C နဲ့ Fleet တို့အကြောင်းကိုသာ ရေးသားဖော်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်။ Antenna Dome ပုံစံ ကို မူတည်လို၊့ မြန်မာလူမျိုးတွေက Dome ကြီးတဲ့ Inmarsat - B ကို " ကြက်ဥ " လို့ခါါကာ၊ Dome သေးတဲ့ Inmarsat - C ကိုတော့ " ငုံးဥ " ရယ်လို့၊ နာမည်ပေးကြပါတယ်။
Fig. Inmarsat - B Antenna Dome
Inmersat - B ဟာ Voice services, Telex services, 9.6kbit/ Sec နှုံးရှိတဲ့ Medium speed fax/ data services နဲ့ 128 kbit/Sec အမြန်နှူံးရှိတဲ့ High speed data services တွေကိုဆောင်ရွက်ပေးပါတယ်။
Fig. Inmarsat - C Antenna Dome
Fig. Inmarsat - C
Inmarsat - C ဟာ GPS နဲ့ ဆက်သွယ်ထားတာမို့ SOLAS Regulation Chapter IV အရ၊ GMDSS System တတ်ဆင်ထားတဲ့သဘေ်ာတိုင်း တတ်ဆင်အသုံးပြုရတဲ့အပြင်၊ Satellite telex ရယ်လို့လည်းခေါါကြ ပါသေးတယ်။ ဒီနေ့ခေါါတ်မှာတော့ Regulation အရသတ်မှတ်ထားလို့ မဟုတ်ပဲ၊ ဆက်သွယ်မှု
အဆင်ပြေစေဖို့ ရည်ရွယ်ကာ Fleet ဆိုတဲ့၊ Mobile Voice Services တွေကိုပါတတ်ဆင် အသုံးပြု လာကြ ပါတယ်။
Fig. Mobile Satellite Communications
Fleet အကြောင်းမပြောခင် GAN (Global Area Network) အကြောင်းကို အစသဘောရေးသားခဲ့ပါဦး မယ်။ GAN ကို M4ရယ်လို့ ခေါါကြပါသေးတယ်။ GAN ဟာ 4. 8 KBit/ Sec နှုံးအသုံးပြုနိုင်တဲ့ Low speed voice service ၊ 2.4K bit/ Sec နှုံး အသုံးပြုနိုင်တဲ့ Fax and Data Service, 64 K bit/ Sec နှုံး အသုံးပြုနိုင်တဲ့ ISDN Integrated Services Digital Network နဲ့ MPDS Mobile Packet Data Service တို့ကို ဝန်ဆောင်မှုပေးပါတယ်။
Fleet ဟာ GAN ကဲ့သို့ဝန်ဆောင်မှုပေးတဲ့ Mobile Communication Service တမျိုးဖြစ်ပြီး၊ ဝန်ဆောင်မှု အမျိုးအစားကို လိုက်လို့ Fleet 33, Fleet 55 နဲ့ Fleet 77 ဆိုပြီးထပ်မံခွဲခြားကြပါတယ်။
Fig. Fleet 77
Fleet 33 ဟာ Voice, Fax, 9.6Kbit/ Sec Data Service နဲ့ MPDS Mobile Packet Data Service တို့ကိုဝန်ဆောင်မှုပေးပါတယ်။ Fleet 55 ဟာ Voice, Fax, 64 Kbit/ Sec ISDN Service နဲ့ MPDS Service တို့ကိုဝန်ဆောင်မှုပေးပါတယ်။ Fleet 77 ကတော့ Voice, Fax, 128 Kbit/ Sec ISDN Service နဲ့ MPDS Service တို့ကို ဝန်ဆောင်မှုပေးပါတယ်။
Fig. ISDN - Integrated Services Digital Network
ဟိုးအရင်က Fleet 33 ကိုစတင်သုံးစွဲခဲ့ပြီး၊ နောက်ပိုင်းမှာ ISDN Integrated Services Digital Network ဝန်ဆောင်မှုကိုပါပေးနိုင်တဲ့ Fleet 77 ကို၊ ပြောင်းလဲအသုံးပြုလာကြပါတယ်။ MPDS Mobile Packet Data Service ဟာ Small Data Amount လောက်သာဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ပြီး၊ E mail နဲ့ Web Browsing မှာ ISDN နဲ့နှိုင်းယှဉ်ကြည့်ရင် အချိန်ပိုကြာသလို၊ ကုန်ကျစားရိတ်လည်း ပိုများတာတွေ့ရပါတယ်။ ISDN ဟာ Constant Data Steam ဖြစ်ပြီး၊ Files, Images, Voice Communication, Fax နဲ့ Video Conferencing တွေကိုပါဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ပါတယ်။
Fleet 33, Fleet 55 နဲ့ Fleet 77 တို့အနက် Fleet 77 တမျိုးသာ IMO ကပြဌာန်းထားတဲ့ ISPS International Ship and Port Facility Security Code နဲ့ ကိုက်ညီတာကို၊ သတိထားမိပါတယ်။
Navigational Equipments & Communication Equipments တွေနဲ၊့ ပက်သက်ပြီး၊ အရှေ့တောင် အာရှ မှာ Authorized Dealer နဲ့ Authorized Service Provider အဖြစ်၊ Maker ထုတ်လုပ်သူများမှ တရားဝင် သတ်မှတ်ပေးထားတဲ့၊ Company က (၄) ခုသာရှိပါတယ်။ အဲဒီ Company တွေကတော့၊ Jason Electronics, Codar Electronics, Consilium နဲ့ Switf Electronics တို့ဖြစ်ပြီး၊ Classification Societies များရဲ့ အသိအမှတ်ပြု Company တွေလည်းဖြစ်ပါတယ်။
Jason Electronics ဟာ ACR Electronics, Jotorn, Navico, Raytheon Anschuetz, Samyung Electronics, Thrane & Thrane, Explorer နဲ့ Sailor တို့ကထုတ်လုပ်တဲ့ Navigational Equipments & Communication Equipments တွေကို Authorized Dealer နဲ့ Authorized Service Provider အဖြစ်တရားဝင်ဆောင်ရွက်ပါတယ်။
Codar Electronics က၊ JRC, YOKOGAWA, John Lilley & Gillie, GME နဲ့ Moonraker တို့ကထုတ်လုပ်တဲ့ Navigational Equipments & Communication Equipments တွေကို Authorized Dealer နဲ့ Authorized Service Provider အဖြစ်တရားဝင်ဆောင်ရွက်ပါတယ်။
Consilium ကတော၊့ Consilium ရဲ့ Navigational Equipments & Communication Equipments တွေ ကိုသာဆောင်ရွက်ပြီး၊ Swift Electronics ကေ TOKIMAC ကထုတ်လုပ်တဲ့ Navigational Equipments & Communication Equipments တွေကို Authorized Dealer နဲ့ Authorized Service Provider အဖြစ် တရားဝင်ဆောင်ရွက်တဲ့အကြောင်း ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။
Posted by ဒူဒူကြီး at 04:49